Isihloko : I-Wall-I
Uhlobo : izithombe, amahlaya
Umqondisi : Andrew Stanton (Andrew Stanton)
Abalingisi : U-Yuri Rebrik, uKaterina Braikovskaya
Umqambi : Thomas Newman
Izwe : i-USA
I-studio Pixar, awazi nje ukudubula izithombe ezimbi, ephethwe ukudubula i-movie yangempela mayelana nothando olukhulu phakathi kwama-robot. Kulesi simo, umqondisi uStanton wathola okuthile okuphikisayo futhi akusikho ukuhlehlisa abantu.
Cishe eminyakeni engu-700 ngemva kokushiya abantu abaseMhlabeni abanjwe yizikhalazo zesikhala esingenamkhawulo kwezinye izinhlobo ze-Floston iPharadesi kusukela ku-"Fifth Element" kaBesson, i-robot Wall-E ehlala emanxiweni aseManhattan.
Ngenqubo yokuvuna iplanethi nokudala imyuziyamu yomuntu yempucuko yabantu, ezinye izimfanelo zomuntu ezithuthukisiwe kuyo, okubaluleke kakhulu ukuba yidala. Ngakho le "yokugcina yamaMohicans" izosebenza, kuze kube yilapho izingxenye zokugcina ezilungiswa yena ngokwakhe, uma usuku olulodwa oluseduze lungenakudalwa isidalwa esingaqondakali sefomu le-oval elihle, lapho uVall-I (kanye naye futhi umbukeli) ngokungangabazeki ubonisa ukuthi owesifazane uhlobene naye. Yiqiniso, owaziwayo cishe waphela u-Vall-I ngomphumela obulalayo, futhi waqhubeka ekuqaleni hhayi ngendlela ephumelele kakhulu kuye. Kodwa iphothithi empofu ingazi kanjani ukuthi zonke izindaba zothando zothando ziqala ngale ndlela ...
U-Andrew Stanton, ozama kakade izindlela zokuziphatha zabantu ezigodini kanye nabakhileyo ekujuleni kolwandle, ngalesi sikhathi wathola isithombe lapho imibono ka-Aldous Huxley noGeorge Orwell ibekwe khona ngolimi olufinyeleleka kubafundi bezingane zasesikoleni. Ngaphezu kwalokho, uStanton wathinta umbuzo obuthakathaka wemvelo yemizwa yabantu, okuyizinkulungwane zezincwadi namafilimu ezinikezwayo. Ukwenza "abantu abangabantu abaningi" nabakhululi besintu ekugqilazweni okuqothulayo kwamarobhothi, umqondisi (futhi ngokufanayo nomlobi obhaliwe) uStanton uphonsela umbukeli (mhlawumbe ngokuzibandakanya) kumbuzo: akuzona imizwa yabantu kuphela umphumela wezinqubo eziyinkimbinkimbi ze-electrochemical (okuyinto nje ukulingisa ngendalo yokufakelwa), futhi ngenxa yalokho, akusithandi umphumela wesigamu esifushane somhlobo othile we-microcircuit. Nakuba ku-Vall-I ngokwayo, impendulo ayibalulekile kakhulu: ivala ngomzuzu wesihlanu wefilimu, futhi lokhu kungasebenzi;) uhlelo luqhubeka kuze kube yilapho izikweletu zokugcina (okungukuthi, ngendlela) zinganconywa ukuba ziweqe - okungenani ngoba isenzo siyaqhubeka futhi phezu kwabo, ngenkathi engekho ngaphansi kwengoma embi kaPetri Gabriel).
I-Soviet iphazili yabafundi abazoba khona: kwaxazululwa ngumuntu oyedwa ophethwe iziqu ezingu-100 kuphela! Futhi kuzovela kuwe?
I-Hollywood VS Soviet cinema
Amabhayisikobho ahamba phambili ngothando
Ngingayigubha kuphi unyaka omusha?
Yini okufanele uhlanganise umbala ophuzi owenziwe ngemvelo ngesikhathi sehlobo ka-2015
Konke kulahlekile: U-Alyona Vodonaeva uthukuthele!
Indlela yokugqoka izithende ngaphandle kobuhlungu
Ukuthuthukiswa ngokomzimba kwengane enokukhubazeka kokuzwa
Ngiyakuhalalisela ngesikhumbuzo somshado wevesi ne-prose
Umphumela we-vitamin P emisebenzini eyisisekelo emzimbeni
Amafutha e-Castor ezithombeni
Ukulungele ukuwa - buyekeza ikhabethe
Khetha ingubo ngohlobo lwesibalo
Okudingayo ukuze wenze umuthi uhlale isikhathi eside
Indlela yokuheha isithakazelo samadoda